युआरएलको वेबसाइट शुभारम्भ – United Reference Laboratory (URL) Pvt. Ltd.
युआरएलको वेबसाइट शुभारम्भ
पोखरा, २३ मङ्सिर। युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालिले आफ्नो सेवा र स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले आफ्नै वेबसाइट सञ्चालन गरेको छ।
दोस्रो वर्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. तारानाथ पौडेलले वेबसाइटको शुभारम्भ गरे। युआरएलको वेबसाइट डब्लुडब्लुडब्लु डट युआरएल डट कम डट एनपीको निर्माण वेबपेज नेपालले गरेको हो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका डा. पौडेलले ल्याबलाई ‘एक्सर्टनल क्यालिटी कन्ट्रोल’ सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे। स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रयोगशालाको ठूलो भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले गरिव र असहायसम्म सेवा पुरयाउन ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख गरे।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका ल्याब टेक्टिसियन अधिकृत राजेन्द्र पौडेलले राजधानी र नेपालमै नभएका परीक्षणसमेत गर्न सक्ने ल्याब पोखरामा हुनु निकै सकारात्मक भएको बताए।
स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोलाले रोगको पहिचान नभइ उपचारको औचित्य नहुने विचार राखे। बास्तोलाले भने–‘रोगको निदान नभइ उपचारको औचित्य हुँदैन। गुणस्तरीय ल्याबका परीक्षणले रोग पत्ता लगाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छन्।’ उनले विभिन्न संघ, संस्थासँगको सहकार्यमा युआरएलले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा पुरयाएको सेवा सराहनीय भएको बताए।
रेडियो अन्नपूर्णका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र श्रेष्ठले सेवालाई प्रभावकारी बनाउन वेबसाइटले निकै सहयोग गर्ने उल्लेख गरे। पोखरेली आफ्नो स्वास्थ्यका बारे निकै सचेत रहेको बताउँदै उनले उल्लेख्य मात्रामा सर्वसाधारण आफै ल्याबमा गएर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु सुखद् पक्ष भएको धारणा राखे।
युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले युआरएलले सामाजिक उत्तरदायित्व र व्यवसाय दुबैलाई उत्तिकै ध्यान दिएको बताए। उनले उच्चस्तरको प्रविधि र मेसिनका कारण साधारण ल्याबभन्दा केही महङ्गो भए पनि आफूहरूको सेवा गुणस्तरीय र विशिष्ट प्रकारका अस्पतालले पनि मान्यता दिने खालको रहेको उल्लेख गरे। ल्याबको क्षेत्रमा युआरएल अग्रणी रहेको दावी गर्दै उनले भने–‘युआरएल नेपालमा सबैभन्दा बढी रक्त परीक्षण हुने ल्याब हो।’
कार्यक्रमको अध्यक्षतासमेत गरेका युआरएलका अध्यक्ष चेतबहादुर गुरुङले क्यालिटी कन्ट्रोल र सुनिश्चितताका लागि केन्द्रीय प्रयोगशालासँग सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। उनले चाडै नै विद्यमान चुनौतिको सामना गर्दै ल्याबमा ‘एक्सटर्नल क्यालिटी कन्ट्रोल’ सुनिश्चित गरिने जानकारी दिए।
सञ्चारकर्मी ऋषि खतिवडाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा वेबपेज नेपालका प्रितम सेन ठकुरीले पनि बोलेका थिए।
Previous Article ३५२ को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण
Next Article First Camp